Annaga nagu saabsan - Zhejiang Yinfeng Glasses Co., Ltd.
Hal qayb oo ka mid ah Zhejiang Yinfeng Glasses Co., Ltd.
Muddo sannado ah oo iskaashi ah, waxaan aasaasnay ​​xiriir adag oo joogto ah macaamiisha macaamiisha suuqyada waaweyn ee caalamiga ah sida Aasiya, Yurub, iyo Ameerika. Waxaan si adag u aaminsanahay in alaabtayada tayada sare leh, adeegyada ku habboon iyo qiimaha macquulka ah ay faa'iido u yeelan doonaan ganacsigaaga. Ku soo dhawoow saaxiibada aduunka oo dhan si ay nala soo xiriiraan si aan u dhisno xiriir ganacsi mustaqbalka.
Shahaadooyinka & Hantidhawrka Warshada
Zhejiang Yinfeng Muraayadaha Co., Ltd. waa mid ka mid ah soosaarayaasha isha xudunta u ah wax soo saarka muraayadaha ee Magaalada Taizhou, Gobolka Zhejiang. Waxay leedahay in ka badan 2,000 mitir oo laba jibbaaran warshado madaxbannaan, in ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo dhoofinta ganacsiga dibadda ah, iyo shahaadooyin dhamaystiran (shahaada CE, shahaadada FDA, imtixaanka ROHS, iwm) Ku takhasusay soo saarista muraayadaha tayada sare leh, muraayadaha akhriska, Muraayadaha PC, muraayadaha xafladaha,ilmomuraayadaha. Maareeyayaasha ganacsiyada waaweyn waxay bixiyaan adeegyo hal-hal ah, iyagoo ku siinaya khibradda ugu dhow iyo habka goobta. Sida alaab-qeybiye heer sare ah, Yinfeng waxa ay sumcad wanaagsan ka samaysay warshadaha, ma aha oo kaliya in ay siiso macaamiisha xalal tayo sare leh oo joogto ah, laakiin sidoo kale had iyo jeer waxay ka go'an tahay qancinta macaamiisha. Xooga saara khibrada macaamiisha oo dhameystiran ayaa ka dhigaysa Yinfeng lammaane waqti dheer la isku halayn karo oo Shiinaha ah. Sannado badan oo iskaashi ah, Yinfeng waxay aasaastay xiriir adag oo joogto ah macaamiisha macaamiisha suuqyada waaweyn ee Aasiya, Yurub, iyo Ameerika. Waxaan si adag u aaminsanahay in alaabtayada tayada sare leh, adeegyada ku habboon iyo qiimaha macquulka ah ay faa'iido u yeelan doonaan ganacsigaaga. Ku soo dhawoow saaxiibada adduunka oo dhan si ay nala soo xiriiraan si aan u abuurno mustaqbal wanaagsan!
Muraayadaha Xisbiga, Muraayadaha Qorraxda ee La Weyn, Muraayadaha Weyn ee Isha Keliya, Muraayadaha Weyn ee Weyn, Muraayadaha Xisbiga ee Shakhsi ahaaneed, Muraayadaha Iftiinka Weyneeya,